Japan Ratidza iri kuumba kumusoro kuti ipe LCD mapaneru kuApple | IPhone nhau
Japan Ratidza iri kuumba kumusoro kuti ipe LCD mapaneru kuApple
Iyo itsva ihone X uye skrini yayo yeOLED inoita kunge iri kupa Apple musoro wakawandisa uye ndosaka mamwe masosi achiratidza kuti ichave iri kusarudza iyo Japan Ratidza sarudzo yeLCD skrini yePhones muna 2018.
Aya epamberi emvura macrystal display (LCDs) anogona kusvika achibva kuJapan kuzobatsira mukugadzira gore rinouya. Chirevo kubva pakati pe Wall Street Journal, saka akataura maawa mashoma apfuura. Zvese izvi hazvireve kuti Apple haibheje pane OLED mapaneru, asi zvinonyatsoratidza kuti kudzamara vagone kuzadzikisa zvavanosarudza kushandisa Yakazara Active skrini kubva kuJapan Ratidza.
Hatigone kutonga kuti iyo Cupertino kambani ichaenderera mberi kubheja pazvikwangwani zveOLED mumakore anotevera - zvirizvo zvazvichazopedzisira zvaita - asi zviri pachena kuti zvese zvinoenderana nekupihwa uye kudiwa uye kana Apple ikasawana aya mapaneru. kugadzira iyo iPhoen en masse inofanirwa kutsvaga mhinduro. Nenhau idzi zvinoratidzwa kuti Apple iri kugadzira nzira yeinotevera gore Kana ari mapaneru e iPhone yavo uye kubva pane zvatinoona zvinoita sekunge ivo havazove maOLED.
Sekureva kwedata rakabatwa neiyo TWSJ svikiro, kambani yeJapan ingadai iine 70% yebhizimusi rekugadzira zvidzitiro uye iri mukutarisira kuendesa mapaneru ayo kune akasimba uye azvino maXiaomi zvishandiso, senge Mi Mix 2. Pakupedzisira, kwayedza kwazvo kuti titaure nezve izvo Apple zvinogona kuita maererano nema skrini eayo maPhones anotevera, kunyangwe Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti OLED skrini dzinozadzikiswa zvizere kubva 2019. Tichaona zvinoitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Japan Ratidza iri kuumba kumusoro kuti ipe LCD mapaneru kuApple
Mapatya, Apple Bhadhara uye kumwe kusahadzika pamusoro peFace ID kujekeswa naApple